admin – SoShwe
3 days ago	Home & Property 0
လွန်ခဲ့သည့် (၃) နှစ်က ကွယ်လွန်သွားသည့် သမီးကို နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့သည့် အမျိုးသမီး။ (ရုပ်/သံ)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ဂျန်ဂျီဆန်အမည်ရ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် Virtual Reality (VR) နည်းပညာအကူအညီဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် (၃) နှစ်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် သူမရဲ့သမီးကို ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို “I Met You” ဟု နာမည်ပေးထားပြီး VR ၌ ဂျီဆန်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့် အသက် (၇) နှစ်အရွယ် သမီးလေး နာယွန်းကို ဖန်တီးပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဂျီဆန်သည် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် VR နားကြပ်နဲ့မျက်မှန်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး သူမရဲ့သမီးနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ VR ထဲ၌ သားအမိနှစ်ယောက်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖန်တီးထားသည့် ဥယျာဉ်တစ်ခုအတွင်း၌ ပြန်လည်တွေ့ဆုံစေခဲ့ပြီး နာယွန်းက “အမေဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ သမီးအကြောင်းကိုရော စဉ်းစားနေရဲ့လား။” …
မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အ့ံအားသင့်ဖွယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ မိခင်တစ်ဦး။
သြစတလေးလျနိုင်ငံ Queenland မြို့က အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်မိခင် Renne Claire Hargreaves ဆိုသူဟာ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနဲ့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကို အချိန်အတော်ကြာ လျှို့ဝှက်သုံးစွဲပေမယ့် ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကို မွေးဖွှားပြီးချိန်မှာတော့ ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Renne တစ်ယောက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ စတင်ပြောင်းလဲလာပါတော့တယ်။ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ အရက်သေစာတွေနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့အားလုံး သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့ အသံတိတ်လူသတ်လက်နက်ကြီးကို အချိန်အတော်ကြာ သုံးစွဲလာတဲ့အခါမှာ Renne ဟာ သူမရဲ့လုပ်ရပ်တွေ မှားနေမှန်းလည်းသိတဲ့အပြင် သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုပါ လျော့ကျလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်အမာချပြီး …
အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်း။ (ရုပ်/သံ)
လူမမယ် ကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပြေးဖက်ကြတဲ့ မြင်ကွင်းကို သင်မြင်ဖူးပါသလား ? ? ? အသက် ၂ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Maxwell နဲ့ Finnegan တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာ နှစ်ရက်ကြာ ခွဲခွာခဲ့ပေမယ့် နှစ်အတန်ကြာ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအလား တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြေးဖက်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဟာ ကြည့်ရှုသူတိုင်းကို ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စေပါတယ်။ ထိုကြည်နူးဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကို Maxwell ရဲ့ ဖခင်က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်လေးနှစ်ဦး သိကျွမ်းတာဟာ တစ်နှစ်ခန့်သာရှိသေးပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဆိုးတူကောင်းဖက်သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး Maxwell ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ Michael Cisneros မှ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး Michael မှ …
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်။
6 days ago	Other 0
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတော်တော်များများက အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းမှုတွေ ပိုမိုခံစားရပြီး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်လည်း ပိုမိုကြိုးစားလာကြပါတယ်။ ဒါဆို ဘာ့ကြောင့် အမျိုးသားတွေအဆုံးစီရင်မှုနှုန်းက အမျိုးသမီးအရေအတွက်ထက် ပိုများနေရတာလဲ ? ? ? WHO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး အဆုံးစီရင်မှုနှုန်းဟာ ခန့်မှန်းခြေ ၇၉၃၀၀၀ ယောက်ခန့်ရှိပြီး အများဆုံးမှာ အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာတော့ ဗြိတိန်ဟာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုနှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အဓိကကျူးလွန်သူတွေကတော့ အသက် ၄၅ နှစ်အောက် အမျိုးသားတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်းကတော့ အမျိုးသားတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာ ရှိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေကို …
ဒေါ်လာ ၁ မီလီယမ်ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့ ကင်ညာနိုင်ငံမှ ကျောင်းဆရာအကြောင်း။
သချင်္ာဘာသာရပ်နဲ့ ရူပဗေဒပညာရပ်တွေကို သင်ကြားတဲ့ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ Peter Tabichi ဟာ လစဉ်လတိုင်း သူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေထဲမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆင်းရဲသားတွေကို အကူအညီပေးဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Peter ကို The Varkey Foundation မှ Global Teacher ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ Peter ဟာ ကင််ညာနိုင်ငံက ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသာရှိပြီး၊ အင်တာနက်လိုင်းချို့တဲ့ကာ ကျောင်းသား ၅၈ ယောက်မှာ ဆရာ ၁ ယောက်နှုန်းသာရှိတဲ့ ရွာငယ်လေးတစ်ခုမှာ စာသင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားအများစုဟာ ဆင်းရဲ့နွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုကနေ ပေါက်ဖွားလာကြပြီး ၃ ပုံ ၁ ပုံ လောက်ဟာ …